Ukunyaniseka kwe-PIVX Coin Supply | PIVX
Sibonga ngokukhethekileyo kwi-PIVian turtleflax ekulungiseleleni le mpendulo esemthethweni.
NgoJuni 1, ngo-2018, uJoël Valenzuela wakhicilela eli nqaku kwiDashForceNews malunga nokunikezelwa kwemali ye-crypto, ukuhanjiswa kwabo, kunye neempembelelo zabo. Ukufuna ukukhuthaza iDash kunye nokuqhathanisa nabakhuphiswano, eli nqaku libandakanya iinani ezahlukeneyo malunga nokunikezwa kwemali kwezinye iindleko zemali ze-crypto. Elinye le ngqekembe i-PIVX, ifowuni ye-2016 yeDash esebenze ukuphucula okubonakalayo njengokuguqulwa kobuQinisekiso besigxina, ukudala ukuphunyezwa kwe-PoS kuphela yenkqubo yomgaqo-bucala yaseZerocoin, ukuphumeza ukuphunyezwa kwe-Zerocoin eyona nto iphambili kwiimarike, nokudala kuphela inkqubo yokuzimela eyimfihlo kwi crypto.
Eli nqaku liquka umbhalo kunye nomfanekiso olandelayo:
“I-degree of centralization distribution will be expected in a new currency, njengoko kunjalo ngePIVX. Nangona kunjalo, kule ngxaki ethile ukubonelela kunikezelwa kakhulu, kunye needilesi ezili-10 eziphezulu eziqulethe malunga neyesibini kwisithathu sobonelelo, isahlulo saleyo esele kwidilesi enye. “
Kufuneka kubonakale ngokukhawuleza kunoma yimuphi umfundi ukuba idatha iphosakele iphakamise iileta eziphezulu ze-1000 ziphethe i-144% yesibonelelo semali. Ukukhangela kwiphepha loluhlu lobutyebi kwi-block explorer apho le datha ivela ngokukhawuleza ibonisa ukuba “idilesi” ephezulu yi-Abcumcumators engaziwayo emele amathokheni abucala kwi-intanethi. Kucacile ukuba zonke iimpawu ezizimeleyo kwi-intanethi ayinabantu abali-1 okanye idilesi apho, ngokunikezelwa ngobukhulu bokubonelela kwangasese, ixabisa kakhulu le nkcukacha.
Kungenzeka ukuba iDash ayiqhelekanga kwiinkqubo zobumfihlo zobungqina be-cryptocurrency, kodwa abaninzi abahlolisisi bebhloko baxhomekeke kwi-bitcoin kwaye abayikutolika i-Zerocoin, i-Zerocash, okanye i-Cryptonote yobumfihlo bucala. Xa ubhalela i-“idilesi” engaziwa “Inombolo” ye-Top 10 kunye ne-Top 100 yokusabalalisa i-11.9% kunye ne-25.3% ngokulandelanayo, inge-64% kunye ne-99%. Ndiyakumema ukuba ukhangele idatha echanekileyo ngqo kwi-explorer yethu ye-block ye-esemthethweni okanye apha apha idatha apha. Ezi zibonisa inani elichanekileyo lokunikezelwa kwe-zPIV njengemali kunye neepesenti yokunikezelwa kwemali yesamba.
Inqaku liyaqhubeka lithi:
“Oku kunzima kakhulu kuba i-PIVX iyinkozo yecala lokubonisa ubungqina, ukuba ityala elitsha linokudalwa kuphela ngabanye abanalo abanye ukuba baqale. Ukongezelela, i-PIVX isebenzisa ulawulo kunye nemodeli yezemali, kunye nabachaphazelekayo ukuvota malunga nezigqibo zophuhliso kunye nokuhanjiswa kweemali zeeprojekthi, ukunikezela ngemali ekhoyo ngokubanzi kakhulu ngaphandle kwezinto ezilula. “
Oku kudukisa ngeendlela ezimbalwa. Ukudibanisa neengcaciso ezingaphambili, kuthetha ukuba i-PIVX isebenza ngokusebenzisa “inzuzo yokucebisa” inkqubo kunye nokulawulwa kwepolitiki. Ukunyaniseka kukuba inkqubo ye-PAGX yokuvuza umvuzo inika umvuzo ngokulinganayo kuwo onke ama-stakers kwaye unobuncwane obuncinci bokuphela kwemali enye. Ngakolunye uhlangothi, ukufumana i-ROI engapheliyo kwiDash ibingqongqo kwizityebi, ezifuna iimali ezili-1,000 zeMasternode okanye i-$ 305,000 ngexesha lokubhala. Nceda khangela le nqaku ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa malunga nokukhishwa kwemali ye-PIVX, imivuzo, kunye nexabiso lokunyuka kwamaxabiso.
Ukuze uchaneke ngakumbi, eli nqaku kufuneka likhankanye ukuba phantse yonke imali, iindidi ezininzi ezizezona ziyingcipheko. Ukongezelela, i-Dash kufuneka ikhankanywe kwakhona ukuba i-masternode zemali zinika inzuzo kubanikazi abaninzi ukuba bahlule imali kwiidilesi ezenza ukuba ulawulo lwemali lukhangeleke ngakumbi. Eli nqaku likwabhekiselele kwidilesi yengxowa-mali ye-Smartcash yoluntu njengokuba imela umninimzi omnye wesiqingatha sokubonelela, nangona ezi ziyimali elawulwayo yolawulo.